Warbixin ku saabsan baasaboorka iyo dhiiga dna. | Somaliska
Warbixintaan waxaan ka soo turjunay bogga Laanta Socdaalka ee Sweden. Laanta Socdaalku waxay qortay bishii Maarso ee sanadkan. Labo go'aan oo mardhow ay gaartay Maxkamada Socdaalka ee Racfaanka ayaa waxay go'aamisay in qaraabada degenaanshaha ka dalbanaya Sweden ay keensadaan baasaboor. Go'aankaan ayaa waxa uu qabanayaa xitaa dadka ka soo jeeda wadamada ay ka midyihiin Soomaaliya taasoo ay ku adagtahay ama aysan macquul ahayn dadka Somalida in ay keenaan baasaboor laga aqbali karo Sweden. Tan ayaa waxay aad ugu adkeynaysaa dadka qaraabada ah in ay degenaansho ka helaan Sweden haddii aysan haysan baasaboor. Wadooyin kale ayaa furan marka ay timaado caruurta iyo caruurta waalidkood u dacwooneysa. Dhiiga DNA-da ayaa loo isticmaali karaa in la ogaado in waalid degan Sweden uu yahay waalidka dhalay ilmo. Sidaasoo kale qof waalid ah oo dibada ku nool ayaa lagu ogaan karaa in uu yahay waalidka dhalay ilmo ku nool Sweden. dhiiga DNA-du wuxuu cadeyn karaa qofka aqoonsigiisa si waalidka ama caruurtu ay degenaansho uga helaan Sweden. Mararka qaar Laanta Socdaalka ayaa siin karta baasaboor dadka aan aysan baasaboor wadankoodii ah, Balse tani macquul uma aha qaraabada ku nool wadankoodii hooyo, maadaama baasaboorkaan aan la siin dadka ajanabiga ah ee ku nool wadankoodii. Sida u degsan Sharciga Ajanibiga ee Sweden qofkasta oo ajanabi ah waa in uu haystaa baasaboor uu ku soo galo Sweden kuna joogo. Maxkamada Socdaalka ee Racfaanka ayaa go'aamisay in qofkasta laga rabo in uu haysto baasaboor. haddii aysan jirin sharci qaas ah oo sidaas si ka duwan qoraya. Mid ka mid ah ujeedooyinka laga leeyahay baasaboorka waxay tahay in la ogaado aqoonsiga qofkasta ee Sweden laga siiyo deganaansho. Balse, sharciyo cadeymo kale ayaa qaban kara kooxo ka mid ah dadka - taas oo macnaheedu yahay in ay deganaansho heli karaan walow aysan cadeyn aqoonsigooda - dadkaas waxaa ka mid ah dadka qaxootinamada ka dalbada Sweden, kuwa magangalyada u baahan, kuwa qaxootinimada loo aqoonsado iyo dadka qaxootiga ee Sweden ay wadamada kale ka soo qaado. Warbixintaan oo English ku qoran ama Iswiidhish waxaad ka aqrisan kartaa bogga Laanta Socdaalka migrationsverket.se
Warbixin ku saabsan baasaboorka iyo dhiiga dna.
Warbixintaan waxaan ka soo turjunay bogga Laanta Socdaalka ee Sweden. Laanta Socdaalku waxay qortay bishii Maarso ee sanadkan.
Labo go’aan oo mardhow ay gaartay Maxkamada Socdaalka ee Racfaanka ayaa waxay go’aamisay in qaraabada degenaanshaha ka dalbanaya Sweden ay keensadaan baasaboor. Go’aankaan ayaa waxa uu qabanayaa xitaa dadka ka soo jeeda wadamada ay ka midyihiin Soomaaliya taasoo ay ku adagtahay ama aysan macquul ahayn dadka Somalida in ay keenaan baasaboor laga aqbali karo Sweden.
Tan ayaa waxay aad ugu adkeynaysaa dadka qaraabada ah in ay degenaansho ka helaan Sweden haddii aysan haysan baasaboor.
Wadooyin kale ayaa furan marka ay timaado caruurta iyo caruurta waalidkood u dacwooneysa.
Dhiiga DNA-da ayaa loo isticmaali karaa in la ogaado in waalid degan Sweden uu yahay waalidka dhalay ilmo. Sidaasoo kale qof waalid ah oo dibada ku nool ayaa lagu ogaan karaa in uu yahay waalidka dhalay ilmo ku nool Sweden. dhiiga DNA-du wuxuu cadeyn karaa qofka aqoonsigiisa si waalidka ama caruurtu ay degenaansho uga helaan Sweden.
Mararka qaar Laanta Socdaalka ayaa siin karta baasaboor dadka aan aysan baasaboor wadankoodii ah, Balse tani macquul uma aha qaraabada ku nool wadankoodii hooyo, maadaama baasaboorkaan aan la siin dadka ajanabiga ah ee ku nool wadankoodii.
Sida u degsan Sharciga Ajanibiga ee Sweden qofkasta oo ajanabi ah waa in uu haystaa baasaboor uu ku soo galo Sweden kuna joogo. Maxkamada Socdaalka ee Racfaanka ayaa go’aamisay in qofkasta laga rabo in uu haysto baasaboor. haddii aysan jirin sharci qaas ah oo sidaas si ka duwan qoraya.
Mid ka mid ah ujeedooyinka laga leeyahay baasaboorka waxay tahay in la ogaado aqoonsiga qofkasta ee Sweden laga siiyo deganaansho. Balse, sharciyo cadeymo kale ayaa qaban kara kooxo ka mid ah dadka – taas oo macnaheedu yahay in ay deganaansho heli karaan walow aysan cadeyn aqoonsigooda – dadkaas waxaa ka mid ah dadka qaxootinamada ka dalbada Sweden, kuwa magangalyada u baahan, kuwa qaxootinimada loo aqoonsado iyo dadka qaxootiga ee Sweden ay wadamada kale ka soo qaado.
Warbixintaan oo English ku qoran ama Iswiidhish waxaad ka aqrisan kartaa bogga Laanta Socdaalka migrationsverket.se
Tirada dadka magangalyo doonka oo siyaaday iyo Soomaalida oo hoos u dhacday
Xagee kala marayaan xisbiyada Sweden?
Xisbiga KD oo ahmiyada siinaya mideynta reeraha Somalida
June 2, 2010 at 18:34
asalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarkaatuhu.
waxaan doonayaa inaan idin weydiiyo walaalo, waxaan rabaa inaan gabadhayda sweden keeno oo aan visa u dalbo, waxaan doonayaa inaan isticmaalo sharciga FREE MOVEMENT OF EUROPEAN CITIZENS ee ah in qof wadankiisii ka guuray oo wadan kale u guuray uu xaq u lee yahay in xaaskiisa loo keeno. Anigu waxaan ka soo guuray Denmark waxaanan usoo guuray sweden markaa maadaama oo aan baasaboorka somaligu shaqaynayn sidee bay suurto gal iigu noqonaysaa inaan u dalbo visa xaaskayga.
aad baad u mahadsan tihiin
June 2, 2010 at 20:37
Wa caleykun wassalam w.r.b walaal.
su’aashaada si saxa waxaa uga jawaabi kara shaqaalaha safaarada Iswiidhan ee ku taala wadanka ay gabadhaada joogto.
Iswiidhan hada qofkasta ee soomaali ah ee dalab ka soo sameeya kenya ama ethiopia waxay u diraan in ay baasaboor keenaan, safaarada ayaana qofka u cadeysa nuuca baasaboorka laga rabo in uu keeno.
June 2, 2010 at 23:27
Aad baad u mahadsan tahaya walaal. Waxaan ogaa iyada oo aan dadka baasaboor la weydiin laakiin maalin dhawayd baan page ka safaarada ee addis ababa galay markaad baan ku arkay ina ay shuruud tahay in qof kastaa la yimaado baasaboor, hase ahaatee waxa iga yaabiyay markaan arkay laba inan oo aanu saaxiibo nahay oo xaasaskoodii loo diiday iyagoo sita baasaboor ay safaarada somalia ee ethiopia u samaysay sababna looga dhigay inay soo cadayn kari waayeen cida ay yihiin.
Aad baad u mahadsan tahay walaalo
July 24, 2010 at 14:12
walaal jimcaale waad ku mahadsan tahay sid hagar la,anta aad
noola socodsiiso arrimaha immigrationka ee afkeena somaliga aad noogu soo qorto.walaal anigu waxaan akhristay go,aanka cusub ee loogu soo rogay in ay basaboor la yimaadaan somalida
maadaama aan baasaborkii somalida la aqoonsaneyn fursadii ahayd in DNA dadka laga qaado meesha miyey ka baxday ,waayo beryahan waxaan maqlaa in dadka caruurtoda dalbaday oo interfiyuu loo dhameeyay la siinayo diidmo marka hadaan basaboorkeena la aqoonsaneyn DNA naaan la qaadeyn rajo lagama laha miyaa in soomalida halkan sharciga ka leh reerkooda la midoobaan.
waad mahadsan tahaay jimcaale wixii fikradaad ah iisoo jawaab.
July 24, 2010 at 15:35
Salaan walaal Abshir, runtii waa i soo gaareen warbixino sheegaya in dadka loo diido degenaanshaha Iswiidhan maadaama aysan wadan baasaboor. Sida Maxkamada Socdaalka ay go’aamisay bari hore baasaboorka waa qasab balse waalidka iyo caruurtiisa waxaa lagu xaqiijin karaa DNA, ma maqal in ay arintaas meesha ka baxday balse insha Allah waxaan xiriir la sameyn doonaa Hay’ada Socdaalka iyo Safaarada Iswiidhan ee Kenya ama Ethiopia si aan jawaab u hello.
August 7, 2010 at 13:02
sc jimcaale walaal waan ku salaalmayaa ninkayga ayaa i dalbadalay aniga & gabadh ay walaalo yihiin ninkayga,walaal aniga ma fahmayo af swedish ku qoran yahay laakiin waxaa meel ku qoran A7,waxaanu qaatay sharciga october 2009, mana shaqeeyo wali markaa sharcigan cusub saamayn ma igu yeelanayaa dhiigna ma la iga qaadayaa aniga & gabadhan ay walaalo yihiin,
August 7, 2010 at 18:09
w/c/s walaal sida ku cad wareysi aan la yeelanahay laanta socdaalka sharciga 15 april ma qabanayo ninkaaga. arinta dhiiga waa mid ay go’aankeeda leeyihiin Hay’ada socdaalka iyo safaarada Sweden balse beryahaan dadka way ku adkeeyeen ayadoo shuruud looga dhigo in ay keensadaan baasaboor. marka Insha Allah kheyr ayaan kuu rajeynayaa.
anwar maxamed says:
December 26, 2010 at 16:39
walalo jimcaale bal war faah faahsan iga sii diidmadan baasa boorka waxay tahay xaas kaygii oo halkaa joogta ayaa lay diiday in lanoogeeyo anifa iyo ciyaalkii oo anbiilbay nasiiyeen malaga yaab inay marka danbe nala ogolaado waayo way xaraysay dib ayay uxaraysay xaaskaygii
December 27, 2010 at 09:32
Walaal baasaboorka la diiday waa kii Soomaalida la siin jiray marka dacwadooda la aqbalo kaasoo loo yaqaanay Go Home. Sweden way joojisay. Waa laga yaabaa in ay isbedel sameeyaan sanadka nagu soo aaday .Insha Allah
January 17, 2011 at 13:53
scm walal waxan joogaa yemen waxana haystaa passport ethiopian waxana rabaa inaan ku noolaado sweden sideen ku
iman karaa ama qarash intee in le,eg ah ayaa igaga bixi kara
January 17, 2011 at 18:24
Walaal qaab fudud oo Sweden lagu yimaado hada ma jiro. haddii aad soo tahriibeysid ma ogi balse xitaa haddii qaraabo kuu joogto halkaan sidaas laguma imaan karo. Tahriibna anigu kugula talin maayo.